Ucabanga ukuhamba ngebhuloho elilandelayo? | Ukuhamba kwe-Absolut
Ucabanga ukuhamba ngebhuloho elilandelayo?
Ukuhamba kwe-Absolut | | Prague, amaRom
Uma ungumhambi ongena ngaphakathi, kungenzeka ukuthi usunayo iso ibhuloho langoNovemba. Ukubuyela enkambisweni nosuku nosuku kubonakala kunzima kangako lapho wazi ukuthi ngesikhathi esifushane uzobe uthokozela ukuphunyuka futhi okukuvumela ukuthi uphinde uthole imizwa edalwa ukuhamba.
Kwesinye isikhathi akulula, ehlobo simosha isamba semali esesabekayo kokungeziwe esingakugwema ngokuphelele. Kepha isilingo sikhona, futhi amathala anama-tapas nezinyosi iningi lezinsuku athola umthwalo wawo. Ngakho njalo sibheka okunikezwayo, izaphulelo sifunda ngisho ukuzenza ukuthi ungaboleka kanjani ukuqhubeka nokuhamba.
1 Amathiphu okusika izindleko ekubalekeni kwakho okulandelayo
2 Thola iYurophu ebhulohweni likaNovemba
Amathiphu okusika izindleko ekubalekeni kwakho okulandelayo
cunt I-Viaconto, iqiniso ukuthi konke kulula, noma kunjalo sizokunikeza izinkomba zokuthi yiziphi izinjini zokusesha ozozisebenzisa, izinhlelo zokusebenza, amakhadi wesikweletu, amaqhinga okuthola ukuhlala ngesabelomali esiphansi, njll.
Ithiphu yethu yokuqala ingenye ebaluleke kakhulu. Kuzokusiza ukonga futhi ukwazi ukuhlala uhambo oluvamile kanye nezindlela zokubaleka kunalokho obengake ucabange ... Iseluleko ukuthi yiba nenkani, le yimfihlo egcinwe kahle kunazo zonke izihambi ezisezingeni eliphakathi. Siphila emphakathini ogcwele izifiso nezilingo ezithatha izingqondo zethu sigcine sesithenga izinto ezingenasidingo ngokuphelele. Uma uthatha isinqumo sokunciphisa ukulahlekelwa kwakho ngokuthanda okwengeziwe, ngeke kube lula, kepha uzobona ukuthi uzokonga kanjani ngokushesha futhi ujabulele ezinye izindlela zokuphunyuka.
Izicelo ozidingayo yebo noma yebo ku-smartphone yakho. ISkyscanner iyinjini yokusesha yendiza eshibhile ngokwenza okuhle. Inikela ngokuhlukahluka okuningi futhi okuhle kunakho konke ukuthi ungasesha inyanga ofuna ukuyihamba ubone ukuthi yiluphi usuku olushibhile. Kubalulekile ukuchitha isikhathi ubheka indiza eshibhile, ngoba imvamisa ingenye yezinto ezibiza kakhulu ohambweni lwakho.
Olunye uhlelo lokusebenza oluwusizo olungakaze lulahleke kufoni yami ephathekayo yi- I-Mapsme. Kumane uhlelo lokusebenza olufana namamephu we-google kepha kuphelele kakhulu. Itiye landa imephu oyidingayo futhi uma usuyilandile ungayisebenzisa ungaxhunyiwe ku-inthanethi futhi kusebenza kahle impela. Lolu hlelo lokusebenza lunikeza izinhlobo ezahlukene zokusesha ezifana namahhotela, izindawo zokudlela, amaphuzu athakazelisayo endaweni, njll. Ivele ingishayise ngomoya.
Futhi ekugcineni ngaphakathi kokubalulekile kwami, ukubhuka ne-Airbnb. Lezi izicelo zokuthola indawo yokuhlala futhi zisebenza ngokumangalisayo. Ungahlela ukusesha kwakho ngokwezidingo zakho futhi uzobona ukuthi imiphumela ngeke ikudumaze. Esinye sezeluleko zami ukuchitha isikhathi ngifuna indawo yokuhlala, njengakwizindiza, ukuthola ukuthengiselana kwangempela kuyindaba yesikhathi nenhlanhla encane. Njengoba bengisho, khetha usuku bese uqala ukusesha indawo yokuhlala. Qaphela! Ungalokothi uhlale nemiphumela yokuqala kuphela, pheqa bese uzobona ukuthi okunikezwayo okungcono kuvela kanjani ngaphakathi kohlelo lokusebenza ngemuva kwalokho. Khumbula ukuthi izinketho ezivela kwasekuqaleni zikhushulelwe ukuba sezikhundleni zokuqala futhi azihlali zishibhile njalo. Kwesinye isikhathi kuyathakazelisa ukuqhathanisa amanani ngqo nehhotela, wazi ukuthi lezi zinhlobo zezicelo zibiza iphesenti kubaphathi, okuthi kwesinye isikhathi ihhotela linikeze ezinye izintengo noma ngisho nokukhushulwa okukhethekile.
Ngicishe ngakhohlwa! Kuya ngezwe ohambela kulo, kufanele ube nezipho ukushintshaniswa kwemali. Le mali iqhathaniswa kanjani ne-euro, izindleko zokuhlala edolobheni ohlose ukuzithola ... Kubalulekile ukuyifunda kancane le ndawo ukuze kungabikho lutho olukumangazayo. Endabeni yokushintshaniswa kwemali, sincoma ukusebenzisa ikhadi elilungele lezi zikhathi, kuneziningana, kepha okuhle kakhulu nge-Bnext Ngenxa yalokhu ungadlulisela kusuka ekhadini lakho, uye ekhadini le-Bnext bese ukhipha imali ngekhomishini encane kuwo wonke amazwe, futhi njalo ngesilinganiso sokushintshana esihle kakhulu. Enye into ethakazelisa kakhulu ukuthi ungalivimba futhi ulisebenzise kabusha ikhadi uqobo kusuka kuselula yakho uma udlula ezindaweni ezikhiqiza ukungathembani noma umane ufuna ukuyivimba lapho ungadingi ukuyisebenzisa.
Iseluleko esihle, huh? Okwakheke kakhulu kwezokuvakasha, lawa macebiso akuyona into entsha, noma mhlawumbe ayintsha, kepha ngithemba ukuthi ungasebenzisa izeluleko ezithile.
Thola iYurophu ebhulohweni likaNovemba
IRoma yindawo engadumazi neze
Ngokwami, ngempelasonto kaNovemba, ngithanda amazwe namadolobha anobuhle kodwa lokho akukude kakhulu ngasikhathi sinye. Okusho ukuthi, uma unezinsuku ezimbalwa, akusona isikhathi sokuthatha uhambo olude ngaphandle kokuthi uqale i-adventure enhle ngaphandle kwethikithi lokubuya. Yebo, ngoNovemba, sincoma ukuhamba eYurophu ngaphandle kokungabaza, nazi iziphakamiso:
Balekela eBelgium futhi ujabulele iBrussels, iGhent neBruges ohambweni olufanayo.
Budapest, indawo eyisifanekiselo futhi ngokukhethekile. Dakwa ngentelezi yalo.
Vakashela i- intelezi yomlingo, hamba inganekwane empilweni yangempela.
La iRoma yakudala okungakaze kube ngumqondo omubi, ogcwele amasiko we-gastronomic kanye nezakhiwo ezinhle.
Kuze kube manje izincomo zethu zebhuloho elilandelayo ngoNovemba.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Ucabanga ukuhamba ngebhuloho elilandelayo?